Antigua neBarbuda Citizenship naAntigua Hermitage Bay Mugove
Kuwana chikamu chehotera kuti uwane ugari hweAntigua neBarbuda
ZIVA ZVESE ZVINOSANGANISIRA, 5 NYANZVI RUWANIKO MUCARIBBEAN
Imba yepamusoro yekutengesa yakavakirwa padenga rejecha rakavanzika, uko kunhuwirira kwefrangipani kunozadza mhepo, ruzha rwemafungu anotenderera mumahombekombe akakukomberedza, uye chiitiko chakagadzirirwa kumutsidzira, kutonga uye kunyaradza mweya wakamirira. Kugamuchirwa kuHermitage Bay.
Yakavakirwa pakona yakanyarara yeAntigua uye ichipa pekugara pakapfava, kugwinya nekudyira, nzvimbo yedu yekuchengetera nzvimbo yakanyatso cherechedzwa inopemberera runyararo, kudziya uye hunoshamisa hunoshamisa hweCaribbean.
Kana zvasvika pakudya, isu tese tinogadzira nguva dzinogara newe nekusingaperi. Uye nezvakawanda zvezvirimwa zvedu zvakasimwa mubindu redu rega remuriwo, unovimbiswa kuravira kwechokwadi kweCaribbean